ISmart Green Tower, isakhiwo esikhulu sokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISmart Green Tower, ibhilidi eliphakeme lokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
Isithombe - FREY ARCHITEKTEN
Izakhiwo zesikhathi esizayo, ziyohluka kakhulu kunalokho eziyikho namuhla. Uma sisanda kuthola ukuthi e-India baqala ukwakha izindlu ngezinto ezenziwe kabusha, eGermany futhi baqale ukwenza okuthile okungashintsha amadolobha ngokuphelele, ngaphezu kwezimpilo zabantu abaningi.
Futhi ngukuthi, kuze kube manje, izakhiwo bezakhiwe zicabanga ngokuzimela kwazo, kepha Kuthiwani uma omunye enziwe wakwazi ukunikezela ngamandla avuselelekayo kuyo yonke indawo? Kungamangalisa, akunjalo? Yebo, leyo yinhloso umakhi wezakhiwo anethemba lokuyifeza. UWolfgang Frey, ngephrojekthi yayo ye-Smart Green Tower, ezobe isho ukuthi yi-smart green Tower.
Ukwakha liphefumulelwe ngamabhethri e-lithium-ion asetshenziswa nguTesla ezimotweni zawo, futhi, inokusebenzisana kwe-Nokia kanye neFraunhofer ISE Institute for Solar Energy Systems. Ngakho-ke kuzoba ngumbhoshongo obukeka njengekusasa lapho abantu abaningana abangaba namandla ahlanzekile ngawo. Kuphi? EGreen Industry Park, eFreiburg.
Umbhoshongo, ozoba nobude bamamitha angama-48, uzokwakhiwa esizeni samamitha-skwele angama-5600. Uma usuqedile, Kuzoba nemizi engama-70 ezoba negumbi lokulala elilodwa kuya kwamane, ngaphezu kwamahhovisi.
I-façade yayo izombozwa ngamaphaneli weseli asebenza kahle kakhulu elanga, anokusebenza kahle okungaphezu kwama-21% uma kuqhathaniswa nemishini yamanje. Lezi ukhiqize cishe u-quarter wesigidi se-kilowatt amahora kagesi. Izophinde ibe namabhethri e-lithium-ion ahlanganiswe nohlaka lwayo.
Ukuze unikeze yonke indawo, izosebenzisa isifunda esiqondile samanje esiqondileNgale ndlela ungonga amandla futhi wehlise izindleko, njengoba ukusatshalaliswa kuzoba okulinganiselayo nokukhaliphile.
Kepha uma lokhu kunganele kuwe, iSmart Green Tower izenza sengathi ingakwazi ukuzimela ngo-100%. Ngaphakathi kwezindonga zayo kuzoba nezindawo ezinikezelwe kuma-aquaponics wokutshala ukudla nokukhulisa izinhlanzi. Amanzi asetshenzisiwe nawo azosebenza ukupholisa amabhethri, ngokungangabazeki okuthakazelisa kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » ISmart Green Tower, ibhilidi eliphakeme lokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu
Iyini futhi yakhiwa kanjani imisinga yolwandle?
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ngekusasa